होटेलको वेल्ली नवगारोड आधिकारिक अधिकारीहरू।
Veliky Navgorod मा आराम: आकर्षण, पर्यटन
मूल उपहार र स्मृति चिन्हहरू - साथीहरू र प्रियजनहरू
होटेल वर्ग * * - 000000 रूबलहरू / दिन; <
तारा - 2000 रूबल / दिन। / LI>
Veliky Navgorod को ऐतिहासिक केन्द्र यूनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश छ। कुनै पनि रूसी शहरहरू पर्खाल चित्रकलाको साथ आर्किटेक्टल स्मारकहरूको धेरै ठूलो संख्यामा काटिएको छ, नवगारोड जस्तै। यसैले शहरलाई अक्सर रूसी फ्लोरेन्स भनिन्छ। उनले टाटार-मंगोलियाली जुवाको आक्रमणबाट ग्रस्त भएनन् र प्राचीन रूसको वास्तुकलाको ठूलो संख्यामा ध्यान दिएन।
पाठ्यक्रम, प्राकृतिक नोभेर्ग्रोडमा आराम गर्दै, यो सबै सबैको प्रतीक हो - नोभेरोड क्वेलिन) - सबै रूस सबै रूस को क्षेत्र मा सबै भन्दा पुरानो Kamaminlin। इतिहासकारहरू तर्क गर्छन् कि पुच्छे xi शताब्दीको सुरूमा निर्माण गरिएको थियो। यो ध्यान छ कि ध्यान यो छ कि राजकुमारहरु ती नेताहरु बसेका थिए, गलत। किरादालिन प्रदर्शन गरिएको मुख्य समारोह जनताको हव्वाको होल्डिंग थियो।
<< p> Velliky Navgorod मा बाँकी को दौरान, तपाईं पक्कै Knunanitsky गुरासो मा भ्रमण गर्नुहुन्छ, जसमा XIV-XV शताब्दीमा। अलेक्सी, जोन र सेन्ट अमीवेनी कोफोनकी विभागबाट रोके।
27 औं शताब्दीको वार्डको अन्न (प्रभु) मा, पुरानो रूसी गहना कौशल र सजावटी कलाहरूको पर्दाफास हुनेछ। म विश्वास गर्न सक्दिन कि यो सेवा यहाँ भएको थियो, र इभान कर्नीको सम्मानमा एक भोज आयोजना गरियो, त्यसपछि राजाको क्रिस्टल क्रिस्टलहरूले शहर लुट्यो।
<< p> हो, यस महान शहरमा त्यहाँ केहि चीज हेर्नुहोस्! ऐतिहासिक स्तनपानमेन्टहरूको प्रशस्तता र प्राचीन वास्तु संरचनाहरू - कसरी सबै चीजहरू गर्ने र केहि पनि नबिर्स? चिन्ता नलिनुहोस्, Veliky novergorod मा एक ठूलो संख्या को होटल शहर केन्द्र मा अवस्थित छ, जसले तपाईंलाई तपाईंको पर्यटन मार्गको लागि मद्दत गर्दछ।
आराम गर्दै, भिटास्लावल वास्तुकार रिजर्भको पालना नगर्नुहोस्, जहाँ काठको विभिन्न प्रकारका काठका चर्चहरू संकलन गरिन्छ (कुलमा 22 स्मारकहरू छन्)।
Veliky Nawgorod मात्र रूस को ऐतिहासिक केन्द्र मात्र होइन, सांस्कृतिक शैक्षिक नाटक थिएटर, ग्रेटराइक र संग्रहालयहरू।
प्रत्येक पर्यटक जो Veliky Navgorgord मा आराम गर्न आए, उनीसँगै यो भव्य भागको बारेमा केहि अविस्मरणीय चीज। यो ब्रह्गोभबाट उत्पादनहरू हुनसक्दछ: मगहरू, मगृहहरू, बाल्टिनहरू, बाल्टिनहरू र अन्य चीजहरू जुन घरमा उपयोगी हुन्छन्। थप रूपमा, बेरेट्टी उत्पादनहरू ओसको पर्दाफास हुँदैनन्।
बच्चाहरू शाक्युनकसँग खुशी पार्न सकिन्छ - एउटा खेलौनासँग मिल्दोजुल्दो छ, तर सन्तोषहरू भरिन्छ।
फेशनहरूले बिलष्टबाट बनेको अद्भुत उपहारहरू लिन सक्दछन् - यो दुबै बक्स र सजावट हुन सक्छ। र तपाईं मजदूरीहरू, ब्रेसलेट र सेलि els ्गहरू किन्न सक्नुहुनेछ, जुन मस्कूज र कपर डिस्कहरू प्रयोग गरीन्छ, उत्पादनहरू xiv - xviii शताब्दीहरू जस्तै, त्यसपछि तपाईं एक वास्तविक रानी जस्तो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ!
Veliky Navgorod को केन्द्र मा एक आधुनिक होटल, शहर को व्यापार स्टेशन बाट केहि कदमहरु मा अवस्थित छ। युरोपेली वास्तुकला र स्टाइलिश स्क्यान्डिनेभियन अधिकारीहरूले होटेल अद्वितीय वातावरणको साथ संयुक्त र आरामदायक बनाउँदछ।
हामी तपाईंलाई हाम्रो होटेलमा पाहुनाको रूपमा देखेर खुसी हुनेछौं र तपाईंलाई यसको उत्तम अभिव्यक्तिमा अतिथि सत्कार गर्न प्रदान गर्दछ।
हाम्रो योग्य कर्मीहरू कुनै पनि कुरामा सहयोग गर्न तयार छन्। चाहे तपाईं व्यापार यात्रामा हुनुहुन्छ, वा आराम वा यात्रा - तपाईं सँधै आराम गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो होटेलमा आराम गर्न सक्नुहुनेछ।
अनुग्रह होटल मल्ची नवगारोडका आरामदायी र आधुनिक होटल हो, जहाँ अतिथिहरू सतर्कताका कर्मचारीहरू छन्, कुनै पनि सबै सान्त्वना र सान्त्वनाका लागि तयार छन्।
दुई कोठाहरू आधुनिक शैलीमा बनेका छन्। यहाँ तपाईं टाढा सडक पछि आराम गर्न सक्नुहुन्छ वा रोमान्टिक साँझ खर्च।